विश्वकप फुटबलमा नेपाल – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
विश्वकप फुटबलमा नेपाल
२०७१ जेष्ठ ३०, शुक्रबार ०२:३८ गते
चार वर्षको प्रतीक्षापछि फुटबलप्रेमीहरुको महान् पर्वका रुपमा विश्वकप फुटबल ब्राजिलको एरिना साउपाओलो रंगशालामा आज शुक्रबारदेखि सुरू भएको छ । विश्वकप फुटबल एक महिनासम्म कौतुहलताबीच चल्नेछ । विश्वकप फुटबलको बीसौँ संस्करणमा हुन लागेको प्रतियोगितामा विश्वका ३२ देशले सहभागिता जनाएका छन् । पाँच पटकको उपाधि विजेता ब्राजिलमा सन् १९५० पछि यो प्रतियोगिता आयोजना भइरहेको छ । विश्वकपकै लागि निर्माण गरिएको साउपाओलोस्थित डे एरिना रंगशालामा भव्य उद्घाटन भएर आयोजक र क्रोयसियाबीच रोमाञ्चकारी खेल प्रदर्शन भएको छ । यसपटक ब्राजिल, जर्मनी, अर्जेन्टिना र स्पेनलाई उपाधिको दाबेदार देश मानिएको छ । यस्तै इटाली, फ्रान्स, उरूग्वे, इङ्ल्यान्ड र नेदरल्यान्डस् पनि बलिया टिम मानिएका छन् । ब्राजिलको १२ वटा सहरमा हुन लागेको प्रतियोगितामा कुल ६४ खेल सञ्चालन हुनेछन् । पहिलो पटक ‘गोल लाइन’ प्रविधिको प्रयोग गरिएकाले विवाद कम हुने विश्लेषकहरुको दाबी छ । आठवटा टिमबीच हुने प्रतिस्पर्धाबाट दुई÷दुई शीर्ष टिम प्रिक्वाटरफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन् । त्यसपछिका खेल भने नकआउटका आधारमा हुनेछ ।
आयोजक राष्ट्र ब्राजिलमा मात्रै होइन, फुटबलको क्रेज अफ्रिका, अमेरिका र युरोपे हुँदै एसियासम्म फैलिएको छ । नेपालका लाखौँ प्रशंसकहरु आ–आफ्ना प्रिय टिमले विश्वकप उपाधि उचाल्ने लक्ष्य लिएका छन् । प्रतियोगिता रातको समयमा हुने भए पनि टोलैपिच्छे प्रशंसकहरु धैर्यका साथ टिभी सेटअगाडि रहने भएका छन् । युवाहरु आ–आफ्ना प्रशंसक टिमको पूर्वानुमान गर्न व्यस्त देखिएका छन् । विश्वकपमा हालसम्म ब्राजिलले पाँच पटक, इटालीले चार पटक, जर्मनीले तीन पटक, अर्जेन्टिना र उरूग्वेले दुई पटक, स्पेन, फ्रान्स र इङ्गल्यान्डले एक÷एक पटक उपाधि जितिसकेका छन् । सन् २००६ को विश्वकपदेखि टुरका रुपमा सुरू गरिएको विश्वकप फुटबलको ट्रफी राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले काठमाडौँको दशरथ रंगशालामा केही महिनाअघि सार्वजनिक गरेका थिए । उतिबेला लाखौँ नेपाली फुटबल प्रशंसकहरुमा खुसीको सञ्चार भएको थियो । ट्रफीलाई ८९ देशमा घुमाइएको थियो । ट्रफी सार्वजनिक समारोहमा बोल्दै अखिल नेपाल फुटबल संघका अध्यÔ गणेश थापाले राष्ट्रपतिसमÔ एउटा स्तरीय रंगशालाको टड्कारो आवश्यकता रहेको औँल्याएका थिए ।
विश्वमै लोकप्रिय मानिएको फुटबल खेल नेपालमा भित्रिएको पनि झन्डै सय वर्È भइसकेको छ । आधिकारिक तथ्याङ्क नभेटिए पनि वि.सं. १९७५ सालतिरै नेपालमा फुटबलले प्रवेश पाएको बताइन्छ । १९९० सालमै जावलाखेलमा क्लब फुटबल प्रतियोगिता भएको इतिहास छ, जहा“ १२ टोलीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ८० वर्Èभन्दा पुराना न्यूरोड टिम (एनआरटी), रानीपोखरी कर्नर टिम (आरसिटी) जस्ता क्लब पनि फुटबलकै लागि स्थापित भएका थिए । नेपाली खेलकुदका जननी मानिने नरशमशेर राणाले फुटबलजस्तै क्रिकेट १९८८ सालमै प्रवेश गराएको इतिहास छ । तर, एक शताब्दीसम्म पनि नेपालले विश्वकप यात्रा तय गर्न नसक्नु दुःखद संयोग मान्नुपर्छ । नेपालका युवा स्ट्राइकर विमल घर्तीमगरले साफ फुटबल च्याम्पियनसिपमा गरेको गोल नै नेपाली इतिहासमा गर्व गर्न लायक ठहरियो । त्यही गोलकै कारण विमल भर्खरै मात्र युरोपेली फुटबल क्लबमा अनुबन्धित हुने मौका पाएका छन् । नेपालमा पछिल्लो समय क्रिकेटमा सफलता प्राप्त भए पनि फुटबलमा चर्चा गर्नलायक उपलब्धि हासिल भएको छैन । जुनसुकै खेलले जति चर्चा र लोकप्रियता कमाए पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेसम्म त्यो दीर्घकालीन हुन सक्दैन । नेपाली फुटबलप्रेमीले विश्वकप हेरेर भन्दा खेलेर रमाउने दिनको प्रतीक्षा गर्नु परेको छ ।